Previous Projects – We Help and Care
Donation to IDPs camp located in Gant Gaw Township, Magway District
( မြန်မာ/English below) We Help and Care hat am 12.01.2022 Nahrungsmittel und Medizin im Wert von 3.550.000 (~1.775 €) an Binnenlandflüchtlinge in Camps Rund um das…
Donation to IDPs camp located at the western part of DeMoSo
We Help and Care has donated the medicines and 100 impregnated bed nets worth 2,000,000 Kyats to the IDPs camp located at the western part…
We Help and Care hat am 07.11.2021 Grundnahrungsmittel und Grundversorgung im Wert von MMK – 678900 Kyats an ein Waisenhaus im Hmaw Bi Township gespendet.Wir…
Unser Team bedankt sich herzlich bei der Gruppe “Freelance – Kutkai Youth Group” (Freelance – ကွတ်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့) für den Transport und die Übergabe von Gütern des…
ရှမ်းမြောက် မုံးစီး၊အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများသို့ အလှူ Hilfe für Binnenlandflüchtlinge
ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ October 14 ရက်နေ့တွင် Pankl Racing System AG Company နှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ပုံငွေပွဲမှ ရရှိသည့် အလှူငွေများအာရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများဖြစ်သော မုံးစီး၊ အောင်သပြေ နှင့် နပက KBC စသော စခန်းများရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း…
Burmese Cuisine Day at Pankl Racing Systems
We Help and Care konnte gemeinsam mit der Firma Pankl Racing Systems AG einen Charity Event durchführen. Am 14.10.2021 kochte der Verein WHC gemeinsam mit…
second batch of buying vegetables from the farmers of Shan State and deliver to households having difficulties for foodstuffs
ကျေးဇူးတင်လွှာ (English Below)ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အသီးအနှံများအားဝယ်ယူပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုများသို့ လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်တွင် ဒုတိယအသုတ်အနေဖြင့် ခိုကိုးရာမဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်း၊ ချောင်းကျိုး အာစိဏ္ဏသီရိကျောင်း၊ အဝါရောင်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်ပရဟိတအသင်း (YGW) တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မာမီကွတ် ခိုကိုးရာမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကူညီရေး (အရှေ့ဒဂုံ)၊ မွန်မြတ်စိတ်ထား တွယ်ရာမဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သာ (မြောက်ဥက္ကလာပ)၊ အောင်ပရဟိတကျောင်း…
Wir helfen Landwirtlnnen und Bedürftigen ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလှုဒါန်းခြင်း
ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အသီးအနှံများအားဝယ်ယူပြီး စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသော အိမ်ထောင်စုများသို့ လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဥ်တွင် ပထမအသုတ်အနေဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၁၀၀၀စာကို လှိုင်သာယာနှင့် မှော်ဘီရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသော အိမ်ထောင်စုများ၊ လှုိင်သာယာရှိမသန်စွမ်းသူများအသင်းများ၊ သီလရှင်ကျောင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများအားပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းထားသည့် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၁၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၀၀၀…
Oxygen Concentrator လှူဒါန်းခြင်း(အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုရန် & English Below)We Help and Care Organization (WHC) hat4Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 7.400.000 Myanmar Kyats (ca. 4352 €)…
Donation to Nanyun Volunteer Team based in Nanyun Town, Naga Autonomous Region, Sagaing District for the prevention of Covid-19.
နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအား Covid-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုရန် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်း(အောက်တွင် မြန်မာလိုဖတ်ရှုရန် & English Below)Der Verein We Help and Care Organisation (WHC) hat PPE Schutzanzüge (100), OP-Masken 100 Pakete…
Donation to 400 Families
အိမ်ခြေ 400 အတွက် ကြက်စွပ်ပြုတ် ဆန် ဆီ ကြက်သွန် ကြက်ဥ အလှူဒါနပြုခြင်း။(Myanmar & English Below)Der Verein “We Help and Care (WHC)” und lokale Spender aus Myanmar haben am…
100 cartons of Eggs donation & Covid -19 Antigen Test Kit donation
ကြက်ဥ အာဟာရ အလှူဒါနပြုခြင်းနှင့် Covid -19 Antigen Test Kit လှူဒါန်းခြင်း(အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုရန် & English Below) We Help and Care (WHC) hat am Freitag dem 30. Juli an…
Der Verein “We Help and Care (WHC)” hat heute 100 Portionen Hühnersuppe an myanmarische Familien gespendet, welche besonders hart von der Covid-19 Pandemie getroffen wurden.…
We Help and Care (WHC) has donated 1,000,000 Kyats worth 125 PPE Suits
We Help and Care (WHC) has donated 1,000,000 Kyats worth 125 PPE Suits (Personal Protective Equipment) to “Myint Myat Say Da Nar Charity” in Myanmar.…
We Help and Care Organization held their very first Fundraising Event in Austria to aid displaced people in Myanmar because of War We Help and…